तीन दिन सार्वजनिक बिदा « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :3February, 2019 5:07 pm
काठमाडौं । तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेकाको स्थानीय तहले सोनाम ल्होसारमा ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएका छन् । मुलुकको विभिन्न भेगमा केही गाउँपालिकाले सोनाम ल्होसारमा माघ २१, २२ र २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् ।
सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, मरिण र घ्याङलेख गाउँपालिकाले ल्होसारमा सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको छ । हरिहरपुरगढीमा ६४ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास छ । मरिण र घ्याङलेख गाउँपालिकाले पनि सोनाम ल्होसारमा ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । ती गाउँ गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास छ ।
त्यस्तै काभ्रेको काभ्रे । रोशी र तेमाल गाउँपालिकाले पनि ल्होसारमा ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । रोशी गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास छ ।सोनाम ल्होसारमा प्रदेश २ सरकारले एकदिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले माघ २२ गते बिदा दिने जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश ३ सरकारले पनि सोनाम ल्होसारमा माघ २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुलुकका अन्य केही गाउँपालिकाले पनि ल्होसारमा बिदा दिने जनाएको छ ।
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
रूखले च्यापेर महिलाको मृत्यु
रूखले च्यापेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
नेपाल केम्पो खुकुरी मार्शल आर्टस् सात प्रदेश, ६५ जिल्लामा
खेलमार्फत नेपालीको अस्तित्व र पहिचान विश्वभर पुर्याउन संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो
चितवन प्रहरी प्रमुखको चेतावनी, रविको अन्तर्वार्ता लिनेलाई कारबाही
मल्लले हिरासतमा रहेका लामिछानेको एक अडियो अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएपछि यस्तो बताउनुभएको छ ।
कलाकारको एकैस्वर- रवि प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन…
प्रहरी हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा कलाकारहरूले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘वर्ष साहित्य पुस्तक, कृति अभिलेख हो’
रमेश शुभेच्छुको संकलन र सम्पादनमा ‘वर्ष साहित्य पुस्तक–२०७४’ प्रकाशित भएको छ ।
वडासचिवबाटै बलात्कार !
वडा नम्बर ७ का सचिव चेतबहादुर कुँवरलाई बलात्कर आरोप लागेको हो ।
‘नाम नतोकौं, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न…
सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने ? हामीभित्रै पनि समस्या छन् ।
सेनाको ‘कम्ब्याट’ लगाउनेलाई कारबाही गरिने
सर्वसाधारण नागरिकले नेपाली सेनाको पोशाक लगाए कारबाही गरिने भएको छ ।
बूढीगङ्गा नगरपालिकामा चट्याङ लागेर बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
३० सेकेण्डकाे आपत्तिजनक भिडियो पोस्टले चकनाचुर बन्याे सपना
कहाली लाग्दो दुर्घटना १५२ को मृत्यु, ३८७ घाइते
लामिछानेबारे अनर्गल प्रचार रोकौं : रेणु दाहाल
कलाकारको एकैस्वर- रवि प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन होस्
भारतका पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको निधन
कार्यकारी सम्पादक: तीर्थ न्यौपाने
डेस्क-सम्पादक: नरेश न्यौपाने
जिल्ला संयोजक: खेम बम